Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Australia njem njem » Asọmpi ụgbọ elu Australia na-agbago: Onye ọ bụla nwere ike ịlanarị?
Australia njem njem • News na ụgbọ elu • etn • Feature Nkeji edemede • iwughachi • Akụkọ Njem Nleta • Travel • Njikọ Mkpakọrịta Akụkọ • Njem njem • Akụkọ njem
George Woods, onye mmekọ sitere na LEK Consulting na Strategic Advisory Firm, onye isi na-ahụ maka ụgbọelu na mpaghara ahụ, sonyere na ndị ọkachamara 3 ụgbọelu banyere asọmpi ụgbọelu Australia na 2021.
Mgbe ị gabigara ọtụtụ mkpọchi n'ihi ọrịa COVID-19, ọ dị ka njem amalitela ịmalitegharị.
Ọ bụ ezie na njem gafere ókè-ala nwere ike ịka ga-eme n'ọdịnihu, kedu ebe anyị nọ n'ahịa asọmpi ụlọ nke asọmpi?
Kedu ihe bụ ụgbọelu na-akpata nke ndị njem chọrọ?
Isonyere Woods maka mkparịta ụka asọmpi ụgbọelu Australia a bụ Cameron McDonald, onye isi nyocha na E & P, onye wetara ọtụtụ afọ nke nyocha nyocha na ogologo oge nke E&P, yana tupu nke ahụ Deutsche Bank na-ekpuchi mpaghara njem. Tupu isonye na nke ahụ, Cameron nọkwa na Hastings Funds Management dị ka onye ntụzi aka yana UTA ebe ọ rụrụ ọrụ na bọọdụ na ọdụ ụgbọ elu Perth.
Anna Wilson, onye si Frontier Economics, bụ ọkachamara microeconomics si n'ofe Pacific na akụnụba ọkachamara na njem na usoro iwu. Ọ na-ahụ maka usoro njem ugbu a ma na-eweta ahụmịhe na-arụ ọrụ yana ndị ahịa n'ofe mpaghara ụgbọelu na netwọkụ, usoro iwu, yana nsogbu amụma amụma.
Rod Sims, onye isi oche nke Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), bụ oche kachasị ogologo na ACCC akụkọ. Tupu nke ahụ, ọ bụ onye isi oche nke National Competition Council, na tupu nke ahụ enwee ọfụma ọrụ dị ka onye ndụmọdụ atụmatụ nọ ọdụ n'ọtụtụ bọọdụ na Canberra dịka odeakwụkwọ PMNC. Gụọ maka - ma ọ bụ nọdụ ala ma gee ntị - ihe otu ngalaba a ma ama kwuru ikwu n'oge a CAPA - forlọ Ọrụ Maka Ikuku omume:
Anyị nwere oge na-adọrọ mmasị nke ọma n'ihu anyị. Anyị nọ n'oge nkịtị na-anọdụ ala n'ahịa ụgbọ elu nke bara uru, nke nwere ụzọ obodo nke anọ kachasịkarị n'ụwa. Ma ụlọ ọrụ ahụ akwụsịla, nọ na usoro iwughachi, ma na ụlọ ọrụ ebe anyị na-ahụ VA na Rex ịmalitegharị ma ọ bụ VA ịmalitegharị na Rex na-amalite azụmaahịa ha. Na ebe anyị na-ahụkwa ndị na-azụ ahịa na-amaliteghachi ndị njem. Ha agafeela ọtụtụ mkpọchi.
A na-emechi ókèala mba ụwa, echekwara m na ọtụtụ mmadụ kwenyere na njem mba ụwa dị anya, mana anyị na-amalite ịhụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na anụ ụlọ. Yabụ n'ihe gbasara mkparịta ụka nke taa, echere m na anyị nwere ike ikwu ihe ụfọdụ. Anyị nwere ike ikwu gburugburu ahịa na otu esi ahụ ya, wee banye n'ime asọmpi ụlọ a. Enwere m ike ịmalite site na ịjụ panel ebe ha chere na anyị nọ na mgbake. Eleghi anya, Cameron, ị chọrọ inye anyị echiche gị ebe ị hụrụ ahịa ụgbọelu na-aga obere oge na-esote?
Chọpụta. Daalụ, George, ma nabata onye ọ bụla na nnọkọ n'ehihie a. N'ihe banyere ebe m na-ahụ ahịa n'oge ahụ, m na-ekpuchi Qantas na Ọdụ ụgbọ elu Sydney dị ka nkwanye ego maka ego. Anyị na-ahụ ahịa dị ka nke na-emebi emebi. Ka ị na-arụtụ aka, mba ụwa nọgidere na-emechi, mba ụwa dị ka a ga-asị na ọ ga-emechi emechi maka ogologo oge. Ma ọ bụghị naanị na njikere nke ụgbọ elu na-arụ ọrụ ma ọ bụ ikike na-arụ ọrụ. Ọ bụkwa ebe a na-achọ ndị njem n'aka ndị njem. Yabụ na ọ gaghị abụ naanị na ha dị njikere ịlaghachi n'ụgbọelu, ọ ga-abụkwa ihe dịka mkpuchi njem, ahụike, yana ndị ọzọ n'ahịa ha na-aga n'echiche anyị. Ya mere, anyị chere na nke ahụ ga-eme ka iweghachite na ahịa mba ụwa maka ogologo oge.
Na ahịa ụlọ, e nwere ụfọdụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ. Ọzọkwa, ọ na-agbanwe agbanwe nke ukwuu ma anyị ahụla steeti  nke mbụ gosipụtara ọsọ ọsọ ịgbachi ala, n'ọnọdụ ụfọdụ n'ime otu awa nke ọkwa. Ya mere, nke ahụ na-eme atụmatụ ezumike na njem azụmahịa nke ukwuu, siri ezigbo ike. Ma ị ga - emesị mee karịa nke a ma nọrọ na Mbugharị na nzukọ nzukọ site na azụmaahịa. Echere m na ị nwere ike ịkwụsị ịhụ ezumike ezumike dị iche iche karịa interstate n'oge dị mkpirikpi tupu anyị amalite ịhụ uru nke ọgwụ mgbochi na-apụ. Ya mere anyi gha ahu otutu nsogbu di iche iche maka ahia ahia nke uwa, ma ufodu nsogbu di iche iche na onodu obi ojoo n'ulo ahia n'oge ezumike nke afo a.
Page 1 nke 6 Na Mbụ Osote